Pakistana: Ady Atao Amin’ny Taliban Sy Ny Drones · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2011 13:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Português, Español, English
Tamin'ny indray maraina izay, ny bitsika voalohany nahasarika ny masoko dia iray avy amin'ny mpanoratra matoan-dahatsoratra an-gazety pakistane, Fasi Zaka (@fasi_zaka):
@fasi_zaka: Ny fotoana farany nahaveloman'ilay mpanao vy very ny ainy tsy maty avy hatrany tamin'ny fipoahana https://www.facebook.com/video/video.php?v=201156813237903
Iray amin'ireo mpanaraka ny bitsika fandefan'i Zaka no namaly tamin'ity bitsika ity:
@Suprah_: Mbola velona ilay zalahy! Manaraka fitsaboana aminà hopitaly iray ao an-toerana izy ary efa nampiresahan'ny BBC aza taoriana kely http://bbc.in/gFbx1r.
Ireo maty tamin'ilay fipoahana tao amin'ny Rummy Club, Karachi ary napetraka ao amin'ny tranom-paty. Sary avy amin'i Syed Yasir Kazmi, copyright Demotix (21/04/2011).
Amin'ny andavanandro, maro ireo Pakistane no mamerina mandefa bitsika na mizara amin'ny alalan'ny Facebook ny vaovao momba ireo fanafihana ataon'ireo mpanao vy very ny ainy na ny drone ary ny valinkafatry asetrin'ny Taliban an'ireny.
Ali Chishti ao amin'ny bilaogy Pakistanpal dia manoratra hoe:
Miisa 234 ny fanafihana nataon'ny drone tao Pakistan hatramin'ny 2004, araka ny “the New America Foundation”, anatin'ireny ireo 22 tamin'ny 2011. Ny famoizan'aina dia novinavinaina ho eo anelanelan'ny 1.439 sy 2.290 – ka ny 1.149 hatramin'ny 1.819 dia nambara ho mpiady avy amin'ny mpanohitra any anatin'ny fanisan'ireo gazety azo antoka [..]
Feno fifanjevoana sy fifanoheran-javatra ao anatin'ireo valin-kafatra avy amin'ny Pakistane. Ny tafika, taorian'ny nahatongavana taminà fifanarahana niarahana amin'i Etazonia tamin'ny 2006, dia namela ny fampiasan-kery voafetra ao anatin'ny faritr'i Pakistan vokatry ny fepetra sarotra any amin'ny FATA noho ny antony masonkarena-tombontsoa fotsiny izao. Mandritra izany fotoana izany, nampiasainy foana ny hevi-bahoaka mba hanerena ankolaka an'i Etazonia.
Ny fanekena ireny fanafihana drone ireny any Pakistan dia mampiditra tsy amin'ny nahim-pony ny vahoaka ao aminy ho toy ny mpiara-dia. Na izany aza, tsy hijerena ny lafiny niforonan'ilay fifanomezan-tanana tsy ara-dalàna, mbola hijaly foana ihany ny mponina, na izany vokatry ny fanafihan'ny drone na avy amin'ny fanafihan'ireo Tehrik-i-Taliban.
Kathy Gannon, solontena Amerikana fahiny nisahana ny raharaha Afghana-Pakistana tamin'ny 1986-2005, dia milaza zavatra tsy mifanalavitra amin'izany ao anatin'ny lahatsorany nivoaka tao amin'ny The Journal Gazette:
Tohina i Pakistan noho fitomboan'ny fanafihan'ireo drone sy ny fiampangana azy ho marefo manoloana ny mpihoko islamika na dia efa ho 3.000 aza ny miaramila maty, dimy taona niadiana tany amin'ireo faritra misy ireo foko mpihoko sy ireo fisamborana ampolony maro nato an'ireo noahiahiana ho olon'ny al-Qaida na mpiray tsikombakomba.
Ny Harfang dia drone mpitsikilo, baikoin'ireo mpanamory mpiady efa matihanina, na mpanamory fiaramanidina fitaterena avy any lavitra. Ampiasain-dry zareo tafika Amerikana any Afghanistan any amin'ny sisintany iraisan'ny Afghana – Pakistana. Sary avy amin'i DigVID, copyright Demotix (11/03/2010).
Ao amin'ny bilaogiko ihany (hoy ny mpanoratra) dia nizara ny fomba fihevitry ny olona sendra nifanena tamiko aho, manoritsoritra ny fiovana tanteraky ny fiainana any an-tananan-dry zareo noho ny tahotra sy ny tebiteby.
Fahd Dar, mpianatra iray avy aoLahore, miteny hoe:
Mitohy ny fiainana saingy sy hitovy velively amin'ny taloha intsony kosa. Feran'ny olona ny fivezivezeny ivelan'ny trano. Kanefa ireo faritra malaza kosa dia mitohy ho be olona hatrany, saingy eo foana ny tahotra olon-tsy fantatra. Miaraka amin'ireo karazam-baravarana misy fitarafana eraky ny kihon-dalana rehetra eo an-tanàna, eny fa hatrany amin'ny faritra fianarana aza, mandeha ho azy ny hoe mahatonga anao ho feno ahiahy sy osa izany. Toerana tsy azo antoka koa i Lahore ankehitriny, raha hihinanany sakafo ankafizinao harivariva ianao, na hijery fampisehoana mahafinaritra ao Al-Hamra. Kanefa, ambony ny fanantenanany, mbola hiova ho tsara ny zavatra rehetra.”
Haris Hameed, mpitantana iray ao aminà sampan-draharaha misahana dokambarotra ao Islamabad:
Ny familianao fiara miala tendro iray mankany amin'ny iray hafa ao Islamabad dia midika fanomezana safidy roa ho anao. Mandray ny lalambe migodana mamakivaky ny Havoana Margalla na ny iray mandalo eo afovoanny tananan'ny fandraharahana, fantatra loatra amin'ny hoe Blue Area / Faritra manga. Fahiny tokoa mantsy izany. Ankehitriny, rehefa mandamina ny dianao, tsy misaina intsony afa-tsy zavatra tokana: ‘Ny làlana toa inona no tsy betsaka sàkana fisavàna ataon'ny mpitandro filaminana?’ […]
Ny fandraisana an'ireny fepetran'ny filaminana ireny ho toy ny sakantsakana apetraka holalovan'ny voalavo any amin'ny labaoratoara fanaovana andrana siantifika dia zavatra tena ilaina amin'ny vanim-potoana misavorovoro, rasin'ny mponin'i Islamabad am-pahatoniana daholo ny zavatra rehetra. Misy mandrakariva ny alahelo sy ny fiaraha-miory amin'ireo niharan-doza rehefa misy baomba mipoaka na misy fanafihan'ny mpampihorohoro mihatra amin'ny tanàna, saingy rehefa vita ny fitandremana andro iray na roa aorian'izay dia miverina amin'ny fanaony andavanandro ny olona. Inoako fa ny kofehy iraisan'ireo olona any an-drenivohitra (tsy ijerena ny sarangam-piarahamonina niaviany sy misy azy), dia ny fanohizan'izy ireo miaina. Ny filentehantsika ao an-trano sy ny fampiatoana ny asa fanao andavanandro indrindra no tena tadiavin'ny mpampihorohoro amintsika. Raha izany no nataontsika, dia midika izany fa nahatratra ny tanjony ny mpampihorohoro, ary nandresy ry zareo. Tsy avelantsika hitranga mihitsy nytoy izany. Noho izany, miaina isika, isanandro isanandro araka izay mitranga eo.
Ny hany azontsika atao dia ny manantena fa atsy ho atsy dia hiverina amin'ny laoniny ny eto Pakistana, saingy toa mbola lavitra ilay antenaina.
qPakistana: Ady Amin'ny Taliban Sy Ny Drone